Fahafatesana dokotera :: Profesora iray voatazon’ny Zandarimaria • AoRaha
Mivoatra isa-minitra sy isan’ora ny vaovao, omaly, mikasika ny famotorana taorian’ny fahitana ny fatin’ny mpitsabo iray tao amin’ny hopitaly Morafeno, tany Toamasina. Nampiantsoana teny amin’ny sampan’ny Zandarimaria misahana ny heloka bevava any Toamasina ny profesora iray. Nalefa nody izy rehefa avy nalaina am-bavany, saingy nantsoina hiverina indray nony avy eo ary voatazon’ny zandary, hatramin’ny omaly hariva.
Tamin’ny 24 mey lasa teo no nahitana ny vatana mangatsiakan’ny mpitsabo, lehiben’ny Hopitaly kely, any Toamasina. Nifangaro ny ahiahy famonoan-tena sy vono olona. Nihantona tamin’ny tady tao amin’ny efitrano nandraisana azy tao amin’ny hopitaly Morafeno mantsy io mpitsabo io, taorian’ny nahatiliana ny tsimok’aretina « Covid-19 » taminy.
Isan’ireo nandà ny tombantombana tamin’ny famonoan-tena ny vady amanjanak’ilay mpitsabo, ka nitaky ny fisokafan’ny fanadihadiana sy mba hivoahan’ny marina tamin’io raharaha io.
Isan’ireo niasa nandritra ny fotoana nidiran’ny Dr Randriamamonjy Daniel, ilay namoy ny ainy, tamin’ny 24 mey lasa teo, tao amin’ny hopitaly manara-penitra ny profesora Ralandison Stéphane, ilay voatazon’ny zandary, araka ny loharanom-baovao. Nampanantsoin’ny mpanao famotorana avokoa ireo mpiasan’ny hopitaly izay amperinasa tamin’io fotoana nisian’ny fahafatesana tao amin’ny hopitaly io.
Fantatra ihany koa fa tsy notsirihina (autopsie) ny razana talohan’ny nandevenana azy.
Tsy nisy nahazoam-baovao amin’ny fizotran’ny famotorana kosa akaiky an’ity raharaha ity. Tsy nanao fanambaràna ihany koa ilay profesora, rehefa avy nivoaka ny tobin’ny zandarimaria, omaly hariva. Minitra maromaro taorian’izay izy no io naverina nantsoina sady notazonina tsy mahazo miala ao amin’ny zandarimaria io.
Nolazain’ny loharanombaovao hafa indray ny nanoloran’ny mpitandro filaminana ny vokatry ny famotorana tamin’ny lehiben’ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany any Toamasina, omaly hariva ihany. Tsy nandà an’izany ny loharanombaovao any amin’ny Fitsarana any an-toerana saingy namaly tsotra fotsiny tamin’ny antso an-tariby fa: « an-dalan’ny fijerena an’izany antontantaratasy mirakitra ny vokatry ny famotorana tamin’iny raharaha fahafatesana mpitsabo iny lehiben’ny Fampanoavana ka tsy mbola afaka miresaka ». Tantara mitohy…
Vahaolan’ny fanjakana :: Miomana amin’ny drafitra hiatrehana ny krizy ny governemanta